Diblomaasi Itoobiyaan ah oo yimid Hargeysa + Ujeedka - Caasimada Online
Home Somaliland Diblomaasi Itoobiyaan ah oo yimid Hargeysa + Ujeedka
Diblomaasi Itoobiyaan ah oo yimid Hargeysa + Ujeedka
Hargeysa (Caasimada Online) – Waxa magaalada Hargeysa ee caasimada Somaliland soo gaaray diblomaasi kasocda dowladda Itoobiya, kadib markii uu dhawaan soo if baxay xiriirka sii xumaanaya ee labada dhinac.
Sida ay ogaatay Caasimada Online, Diblomaasigaasi ayaa noqonaya wakiilka cusub Dowladda Itoobiya ee Somaliland, wuxuuna imanaya muddo badan kadib markii ay wakiilkeedii hore uga yeertay Hargeysa.
Wakiilka cusub ee Itoobiya, Amb. Siciid Maxamed Jibriil oo kasoo kicitimaya Addis-Ababa ayaa waxa madaarka Hargeysa ee Cigaal kusoo dhaweeyay xubno ka tirsan Wasaaraddda arrimaha dibedda Somaliland.
Magacaabista Wakiilkan cusub ayaa imaneysa xili uu wafdi ka socda Itoobiya uu yimid Somaliland, kadib markii ay xiriir cusub la sameysatay Masar oo ay si weyn isku hayaan dowladda Itoobiya.